Etu ị ga-esi kesaa ihu igwe Mac anyị na netwọkụ mpaghara | Esi m mac
Otu nhọrọ anyị nwere site na usoro ihe mmasị bụ ịkekọrịta ihuenyo. Nhọrọ a dị site na ngwa ngwa na Mac na ndị ọrụ ndị ọzọ na mpụga ọfịs anyị, enwere ike ime na netwọk mpaghara. Site na nhọrọ a anyị ga-enwe ike ịkekọrịta ọdịnaya ihuenyo anyị na Mac ọzọ na ụzọ dị mfe ma dị mma, ihe nwere ike ịbịaru aka n'oge ụfọdụ.
Nhọrọ a nwere ike ịba uru na gburugburu ọrụ ebe anyị nwere ịkekọrịta ma ọ bụ gbanwee ihe na Mac anyị ma anyị chọrọ ka onye ọrụ ọzọ nwee ike ịnweta ihuenyo anyị. O doro anya na ọ nwere ọtụtụ ojiji na onye ọ bụla nwere ike iji ya mee ihe ọ bụla ha chọrọ, yabụ ka anyị hụ otu esi eme ya.
Iji mezuo usoro a, ọ dị mfe dịka ịnweta Mmasị sistemụ na ịpị folda ahụ Kwuo Ozugbo n'ime, naanị anyị ga-pịa nhọrọ anyị chọrọ, na nke a Ihu ihuenyo:
Ozugbo emerela usoro dị mfe a, onye ọrụ chọrọ ịhụ ihuenyo anyị ga-emerịrị tinye adreesị vnc na-egosi na ala nke «Screen nkekọrịta: arụ ọrụ» ma ọ bụ site na ịnweta ozugbo na anyị Mac search na nchọta Finder.
Site na usoro ndị a anyị nwere ike ịkekọrịta ihuenyo ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhazigharị nhọrọ ntakịrị karịa anyị nwere ike pịa «Ntọala kọmputa… » na nkebi a anyị ga-enwe ike hazie ikikere iji chịkwaa ihuenyo anyị na kwa nhọrọ nke ndị na-ekiri maka nwere iji okwuntughe na anyị guzobere iji ihuenyo anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkuzi » Etu ị ga-esi kesaa ihu igwe Mac anyị na netwọkụ mpaghara
Soriko Radio n'efu na ụlọ ahịa Mac App maka obere oge